KIA အဖွဲ့ က ကချင်ဒေသအတွင်းနေထိုင်သည့် ရှမ်းတိုင်းသူနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသူတွေကို ဂျပန်ခေတ်ဆောင်ကြာမြိုင်မျိုးလုပ်နေပြီးလား? ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
KIA အဖွဲ့ က ကချင်ဒေသအတွင်းနေထိုင်သည့် ရှမ်းတိုင်းသူနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသူတွေကို ဂျပန်ခေတ်ဆောင်ကြာမြိုင်မျိုးလုပ်နေပြီးလား?
Postado Tuesday, November 20, 2012 at 5:31 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ကြီးလေးသွယ် ရှိသည့်အနက် ဧရာဝ တီမြစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူ မျိုးေ တွအားလုံးကို အကျိုးကျေးဇူး များစွာပြုသော မြစ်တစ်စင်းဖြစ် သကဲ့သို့ အဲဒီ ဧရာဝတီမြစ် စတင်မြစ် ဖျား ခံ တဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကလည်း အလွန်လှပတဲ့ ပြည်နယ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ် လုံး ရေ ခဲတွေနဲ့ ဖုံးလွမ်း နေတဲ့ တောင်တန်းတွေ၊ သာယာလှပတဲ့နေ ရာတွေအပြင် အရမ်းကိုရိုးသားဖြူစင်တဲ့ တိုင်း ရင်း သား စုပေါင်းနေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင် တိုင်းရင်း သားတွေ အပြင် ရှမ်း၊ ဗမာ၊ ကရင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ မွန်နှင့် အခြားသော တိုင်းရင်းသား များ လည်း အေးချမ်းစွာစုပေါင်း နေထိုင်ကြပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကျွန်း၊ ကျောက်စိမ်းနဲ့ အခြား သယံဇာ တ များ စွာ ထွက်တဲ့နေရာဒေသ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လဲ အေးချမ်းလှတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လလောက်ကနေစပြီး စစ်မီးများ တစ် ဟုန်း ဟုန်းေ တာက်လောင်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၄ခုနှစ်မှစပြီး ၁၇ နှစ်ကြာ ငြိမ်းချမ်းရေးယူ ထားပြီးကာမှ လူမျိုး ကြီး ၀ါဒ ဆွဲကိုင်တဲ့ KIO/KIA ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားခဲ့ရပါသည်။ ဂျိန်းဖော၊ လချိတ်၊ လ ၀ မ်နဲ့ လီစူး စတဲ့လူမျိုးစုများ ပေါင်းစည်းပြီးထားပေမယ့် လက်ရှိ KIA/KIO ကချင် လူ မျိုး ခေါင်းဆောင်ကြီး များ သည် ကချင်တစ်မျိုးသားလုံးအတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော် လည်း ဂျိန်းဖော လူမျိုးစု တစ်ခုတည်း အတွက်သာကြည့်ပြီး ကျန်တဲ့ ကချင်မျိုးနွယ်စုခြင်းတူညီတဲ့ အခြား မျိုးနွယ်စု များကို နှိမ်ကွက် ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအတွက် အခွန်တွေကို အဆ မတန် ကောက်ခံတဲ့အပြင် လူသစ်များကိုလည်း မတရားစုဆောင်းခံနေရပါတယ်။ လူသစ်စုဆောင်းရာမှာ အမျိုးသားများ အပြင် အမျိုးသမီးများကို ပါအဓမ္မစုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
စုဆောင်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဂျိန်းဖော အမျိုးသမီး မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ကချင် မျိုးနွယ်စု မိန်းကလေးများနဲ့ ရှမ်း၊ ကယား၊ ဗမာ စတဲ့ လူမျိုးစုအမျိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ ကြပါ သည်။ စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာ မိန်းကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့စခန်းတွေမှာ ခြေဆုတ်လက်နယ် ပြုလုပ်ဖို့ ဖမ်း ဆီး ခေါ်ဆောင်သွားကြပါသည်။ တချို့လှပတဲ့မိန်းကလေးတွေကို KIA/KIO ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက သူတို့ ရဲ့ သက်တော်စောင့်အဖြစ် (ခြေတော်တင်/ ကိုယ်လုပ်တော်အဖြစ်) အသုံးပြုသလို၊ တရုတ်နိုင်ငံ သို့လည်း ငွေကြေးနဲ့ရောင်းစား နေတာကို လည်းသိရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံသွားရတဲ့ မိန်းကလေးေ တွရဲ့ဘ၀က မတွေးဝံ့စရာ ပါဘဲ။ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ မိန်းကလေးအများစုမှာ ရှမ်းမိန်းကလေးငယ် ၁၆ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်ကြား မိန်းကလေး များဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
KIA က တိုက်ပွဲစဖြစ်စမှာ ကချင်လူငယ်လေးတွေကိုသာ တပ်သားသစ်အဖြစ် စုဆောင်းေ ပ မယ့် နောက်ပိုင်း မှာ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကိုပါစုဆောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KIA အတွင်းမှာ ကချင် လူမျိုးနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေကို လူမျိုးရေးခွဲခြားနေမှုတွေကိုလုပ်နေပါတယ်။ ၂၀၁၁နှစ် ကုန်ပို င်းေ လာက်ကနေစပြီး မိန်းမငယ်တွေကိုပါ အတင်းအဓမ္မ စုဆောင်းလာကြပါတယ်။ လိုင်ဇာမှာဆိုရင် အမျိုး သမီး ကိုယ်ရံတော်တပ်ဖွဲ့ တွေကို ဖွဲ့ပြီး KIA ခေါင်းဆောင်ကြီးေ တွရဲ့ ဘေးနား မှာေ နပြီး ခြေဆုပ်လက်နယ် အလုပ်အကျွေးပြု ကိုယ်လုပ်တော် လုပ်ပေးနေရပါတယ်။
KIA ၏သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း KIA ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဒူဝါဇော်တူးနဲ့ ဒူဝါေ ဇ်ာဆိုင်းတို့လဲ ဓမြတိုက် ဘိန်းလုပ်ပြီး ရတဲ့ငွေကို အဖွဲ့ထဲကိုမပေးဘဲ ကိုယ်ပိုင်သုံးက ထိုင်းနိုင်မှာ မိန်းမေ တွနဲ့ ပျော်ပါးနေတဲ့အတွက် ၁၉၇၅ခုနှစ်မှာ KIA အဖွဲ့ထဲကဘဲ ပြန်လာတဲ့အချိန် လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့ ပါတ ယ်။ အခုေ ခါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင် မိန်းမကိစ္စကို စွဲလန်းတက်မက်စွာ လိုက်စားနေတာ ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ KIA အဖွဲ့၏ ဒုတိယခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်ဆိုရင် သူ့ ကွန်ပျူတာ စာရေး မလေးနဲ့ ဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရလာလို့ ဖျက်ခိုင်းရာကနေ ကောင်မလေးသေဆုံး သွားခဲ့ ပါသည်။ အဲဒီအတွက်ကို ကောင်မလေး မိဘဆွေမျိုးများက မကျေနပ်ဖြစ်ပေမယ့် ကြောက်လို့ဘာမှ မပြော ရဲခဲ့ကြပါဘူး။
KIA အဖွဲ့က ၄လပိုင်းအတွင်းမှာပင် တာလောကြီးမှ မိန်းကလေး ၁၂ ယောက်၊ ကာမိုင်းမှ ၁ယောက်၊ နန်ပေါင်ချောင်းရွှေမှော်မှာ ၇ ယောက် စုစုပေါင်း ၂၀ယောက်အားလည်းကောင်း၊ ၅လပိုင်းမှာ ၀ိုင်းမော် နောင်စီပေါရွာ၊ နန့်ဝါရွာ နဲ့ ပူတာအိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှနေပြီး ၈ ယောက် အားအတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီး ခေါ်သွားခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးမှုမှ ၂၀၁၁ခုနှစ် စစ်စဖြစ်ချိန်မှ နှစ်ကုန်ထိ မိန်းကလေးများကို ဖမ်းဆီးမှု မှာ ၅ယောက်သာ ရှိခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၂ခုနှစ် အစောပိုင်းမှစပြီး မိန်းကလေးများကို ဖမ်းဆီးမှု ပိုမိုများပြားလာကို ကြားသိခဲ့ရပါသည်။
ဒုက္ခသည်စခန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း မိန်းကလေးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ ကလေးငယ်များ သာ ရှိနေ တယ်ကိုတွေ့ရပြီး၊ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများကို အကြပ်ကိုင်ပြီး လင်ယောကျာင်္းကို အကြပ်ကိုင် စစ်တိုက် ခိုင်းပေမယ့် အဲဒီအမျိုးသမီးများကို စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘဲ နောက်တန်းမှာရှိတဲ့ KIA တပ် သား များ နဲ့ ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်မှုများလည်းရှိသလို၊ အရွယ်ကောင်း အမျိုးသမီးေ တွ ကို ရှေ့တန်းစခန်းတွေ မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ဂျပန်တွေ ကိုးရီးယားမတွေကို လိင်ကျွန် အဖြစ် အသုံြး ပုသလို ခေါ်ယူ စေခိုင်းကြပါတယ်။ အရုပ်ရည်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို KIA ခေါင်းဆောင် ပိုင်းတွေ က ခေါ်ယူစားသုံးပြီး ဇိမ်ခံခန်းတွေကို ပို့ဆောင်ခြင်းများရှိပြီး အချို့အမျိုးသမီးများကို တရုတ်နိုင်ငံ တို့ ရောင်း စားကာ လက်နက်နဲ့ လဲလှယ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နေတာကို အထောက်များ အရသိရှိရပါတယ်။
လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန် နှင့် ၄င်းတို့၏ တစ်ဖက်ကန်း တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရင်ကျန်းမြို့နဲ့ ရွှေလီမြို့တို့တွင် KIA ခေါင်းေ ဆာင်ကြီးများပိုင်ဆိုင်သော ဇိမ်ခန်း၊ ဆောင်ကြာမြိုင်တွေမှာ မိန်းကလေးတွေကို လိင်ကျေး ကျွန် အဖြစ် စေခိုင်းမှုများလဲ အများအပြားရှိနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ လိုင်ဇာဟိုတယ်မှာဆိုလဲ ကချင်ြ ပည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသူလေးများကို အသက်၊ ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်၊ တိုင်းရင်းသူ မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်း လိုက်တွေ သတ်မှတ်ထား ပါသည်။ အဲဒီမိန်းကလေးများကို အရင် ကချင်မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက စားသုံးပြီး အတင်း အဓမ္မ စေခိုင်မှု တွေရှိနေပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်က တိုင်းရင်သူတွေရဲ့ဘ၀က အရမ်းကို စိုးရိမ်စရာေ တွဖြစ်နေပြီး လုံခြုံမှုမရှိ သည့်အပြင် မိမိတို့ရဲ့ဘ၀တွေကိုပါ အရောင်းစားခံ အသုံးတော်ခံ ဘ၀ကို ရောက်ရှိနေကြရပါတယ်။ အစ်ကို မောင် နဲ့ အဖေကို စစ်တိုက်ခိုင်း အစ်မ၊ ညီမနဲ့ အမေ ကို -ာခန်း(ဇိမ်ခန်း) ပို့၊ အတင်းအဓမ္မကျင့် နဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က မိန်းကလေးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ တော်တော်လေး ကိုဆိုး ၀ါးေ နရပါသည်။
အလွန်လှပပြီး သယံဇာတတွေပေါများတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ကြီးဟာ KIA/KIO ကြောင့် ဆုံးရှုံး အကျဉ်း တန်ဖြ စ်နေရကာ၊ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ရိုးသားစွာနေထိုင်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသူေ လး တွေ ဟာလည်း၊ လူဖြစ်ရှုံးကာ ဆောင်ကြာမြိုင်သို့ ပို့ဆောင်ခံနေရတာ သနားစရာ အဖြစ်သို့ရောက်နေ ရပါ တယ်။ ဂျိန်းဖော လူမျိုးကြီးဝါဒကို ကျင့်သုံးပြီး ကချင်ပြည်နယ် ကိုထူထောင်မယ့် ကချင်ခေါင်းဆောင်ကြီး များ၏ နိုင်ငံထူထောင်ပုံက တိုင်းရင်းသူတွေကို ဂျပန်ခေတ်ဆောင်ကြိုင်မြိုင်ဖွင့်၊ လောင်းကစားဝိုင်းဖွင့်၊ လူသတ် ဓားမြတိုက် အဖြစ်ကိုသာလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ လိုင်ဇာမြိူ့က KIA စစ်သားဟောင်း တစ် ဦးဖြစ်တဲ့ ဒူဝါးဇော်ဒေါင်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Tags: လူမှုရေး, သတင်း, ဆောင်းပါး